दिनेशको चलचित्रमा प्रदीप, सन्तोषको ‘क्याम्प’बाट आउट ! - नेपालबहस
दिनेशको चलचित्रमा प्रदीप, सन्तोषको ‘क्याम्प’बाट आउट !
| २१:२६:०४ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । एक समय निर्देशक दिनेश राउत र निर्माता सन्तोष सेनबीच ठूलै मतभेद थियो । क्लासिक र प्रेमगित एकैदिन रिलिज भएपछि उनीहरुबीच मतभेद मात्रै होइन, सार्वजनिक टिक्का टिप्पणी समेत हुने गरेका थिए ।
निर्माता र निर्देशकबीचकै लडाईमा कलाकार पनि दुई कित्तामा छु्ट्टिएका थिए । तर अहिले समय फेरिएको छ । समयसँगै हिजो एक बेला कित्ताकाट भएका कलाकार एक अर्कासँग नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने तरखरमा जुुटेका छन् ।
पछिल्लो समय क्लासिक निर्देशक दिनेश राउतको नयाँ चलचित्रमा प्रदीप खड्का देखिने भएका छन् । नाम नजुरेको फिल्मका लागि प्रदीपले दिनेशलाई साथ दिने बचन दिएका छन् । उनीहरुबीच चलचित्र निर्माण गर्ने र मुख्य कलाकार प्रदीप हुने पक्कापक्की जस्तै भइसकेको छ ।
प्रदीपले पछिल्लो चलचित्र प्रेमगित खेलेका छन् । जुन प्रदर्शन हुन बाँकी छ । तर पछिल्लो दुई बर्षयता दिनेशका चलचित्र सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक उनले विशाल भण्डारीलाई निर्देशन गर्न लगाएर सेल्फी किङ निर्माण गरेका थिए । चलचित्र सफल नभएपछि उनले नयाँ चलचित्र निर्माण तथा निर्देशन गरेका छैनन् ।
अब प्रदीपको चक्लेटी लुक्सबाट नयाँ लभस्टोरी फिल्म बनाउने योजना दिनेशको छ । तर प्रश्न उठ्छ, प्रदीप सन्तोष सेनको क्याम्प छाडेर साच्चै सफल होलान त ? किनकी प्रेमगितपछि प्रदीपले खेलेका लभ स्टेशन, लिलीबिली र रोजी तीनवटै चलचित्र सुपर फ्लप बनेका थिए ।
लगालग ३ वटा चलचित्र फ्लप बनेपछि प्रदीप धर्मराएको करियर उकास्न फेरि सन्तोष सेनकै भरथेगमा पुगेका थिए ।